Home News Bishii Ramadan dowladda Somaliya waxa ay siisay kooxda Al Shabab 1.8 Milyan...
Bishii Ramadan dowladda Somaliya waxa ay siisay kooxda Al Shabab 1.8 Milyan doolar! (Cadeyn)
Sidii ay Muqdishu Online horay idinkuugu soo gudbisay bartamahii bishii barakaysneyd ee Ramadaan, dowlada Soomaaliya ayaa waxaa ay lacag laaluush ah siisay kooxda Al Shabaab. Bixinta lacagtaas ayaa ujeedadeedu ahayd in kooxda Al Shabaab ayan wax qarax iyo iyo weerar waa-wayn ayan ka sameeynin Magaalada Muqadishu. Dowladda uu hogaamiyo Xassan Cali Kheyre ayaa doonaysay in ku faanaan in amniga Magaalada Muqadishu la sugay, xukuumadana ay ku guulaysatay in ciidankii xasalinta guul ka soo hooyay xasilinta caasimadda.
Si hadafkaas loo gaaro ayaa qaar ka mida mas’uuliyiinta dowladda waxa ay xiriir wadahadal ah la fureen kooxda argagaxisadsa Al Shabaab. Kulankii ugu horeeyay ee labada dhinac ayaa waxa uu ka dhacay guri ku yaalo deegaanka degmada Wardhiigley oo ku dhaw madaxtooyadda, labo kulan oo kalana waxa ay ka dhaceen guriga mas’uul ka mida dowladda Federaalka.
Kulamadaan waxaa hogaaminayay taladeedana lahaa Agaasime ku xigeenka Hay’adda Sidoonka Qaranka (NISA) Mudane Fahad Yaasiin. Qorshahan waxaa sidoo kale qaban-qaabadeeda qayb weyn ku lahaa Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre oo si ba’an u rabay in uu xalaaleeyo shaqada ciidan beeleedkii Xasilinta.
Dhowr asbuuc oo wadahal u socday labada dhinac (Al Shabab iyo Xukuumadda) ayaa waxaa labada dhinac isla garteen qodobadaan:
1. Dolwadda waxaa ay bixinaysaa $1.8 Milyan oo ah lacagta maraykanka, lacagtana waxaa la bixinayaa iyada oo kaamil ah oo isla socoto.
2. Lacagta waxaa lagu wareejinayaa taliye ku xigeenka kooxda Al Shabab Mahad Karateey iyada oo lacagta loo marinayo labo ganacsato oo ka ganacsato magaalooyinka Baydhabo iyo Muqadishu.
3. Lacagta iyo sida loo dhiibayo waxaa go’aankeeda lahaan doono Fahad Yasin
4. Kooxda Al Shabaab oo lagu yaqaano in ay dhib badan geystaan bisha Ramadnaan ayaa balan qaaday in ayan howl gal xoog leh ka sameeyn doonin Magaalada Muqadishu
5. Si loo qariyo heshiiska labada dhinac dowladda Soomaaliya waxa ay xiraysaa dhamaan wadooyinka magaalada Muqadishu Inta lagu jiro bisha Ramadaan taas oo kooxda Al Shabaab u noqonaayso mar-marsiyo ama sababta ay u fulinwaayeen howlgal bisha Ramadaan. Waxaa la isla gartay in xiritaanka wadada marnaba aan la furo doonin hadii xataa shacabku dhib u arkaan ama ka cawdaan
6. Heshiiskaan waxa uu ku kooban tahay bisha Ramadan oo kali ah
7. Hadii xukuumadda danaynayso in la dheereyo waqtiga heshiiskaan ku qoran waxa ay xukuumadda bixinaysaa lacag bilkastaa loo howlgalka joogsado.
Hadaba Lacagtaas marka ay gaartay kooxda Al Shabab ayaa waxa ka dhex abuurtay colaad taas oo salka ku haysay lacagta lagu wareejiyay kooxdooda. Qaar ka mida hogaanka Al Shabab ayaa u arkay lacagtaas in ay ujeedadeedu tahay in ayaga la iska horkoono hogaanka kooxda Al Shabab. Si kaataba ha noqotee kooxda Al Shabab ayaa markiii danbe ku heshiiyay qeybsashada lacagta. Sida aad la socotaan Al Shabab ayaa ay ka soo xirmeen Inta badan ilihii dhaqaalaha sida dhoofinta dhuxusha. Lacagta lagu wareejiyayna aad ayaa ay ugu baahnaayeen xiligaas.
Qaar ka mida sirdoonka wadamada danaha gaarka ah ka leh Soomaaliya oo markii lacagta la bixiyay ka warhelay ayaa fartiin ugu sheegay RW Kheyre in la og yahay lacagta la bixiyay. Inkastoo RW Kheyre isku dayay in uu inkiro ama dafaro in uu isaga wax ka ogyahay bixinta lacagtaas hadana waa lagu cadeeyay. Talaabadan oo ay qaaday xukuumadda RW kheyre ayaa waxa ay walwal ka dhex abuurtay ciidamada AMISON iyo kuwa Mareykanka ee ka howlgala Soomaaliya.
RW kheyre iyo Fahad Yasin ayaa caado ka dhigtay in ay lacag ku xaliyaan xaaladkastaa ee la soo daristo dowladda. Waxaa hadda socda baaritaan ay wadaan qaar ka mida wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya si danbe loogu soo oogo kooxda ka danbeeysay bixinta lacagtaas oo loo arki doono in ay qayb ka yihiin kooxda argagaxisadda Al Shabab.
Previous articleNin Hubeeysan oo Rasaaseeyay Haween qaad ku Iibinaayay Beerta Jaadka
Next articleAl-shabaab oo Fariin dirtay Al-qaacida
Golaha wasiirada xukumada kheeyre oo amar lagusoo rogay!!
Madaxweynayaasha Dalalka Soomaaliya, Eritrea Iyo Itoobiya Oo Kala Saxiixday Heshiisyo Taariqi...